Naijiria – Page 2 – Igbo Services
Onyeisiala Muhammadu Buhari arịọla ndị Academic Staff Union of Universities (ASUU) ka ha leba anya na ọnọdụ ụmụakwụkwọ rụba ọrụ ya na-aga n'ihu maka ọdịmma obodo. Ndị nkuzi mahadum ewepụtala izu iri na abụọ ọzọ nke nrụpụta ụlọ…
Abuja amalitela ọrụ iji kwụsị mkpọchi okporo ụzọ
Ụlọ ọrụ FCTA Directorate of Road Traffic Services (DRTS) kwuru na ọ malitere ọrụ ahụ pụrụ iche site na nkwado nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na mkpuchi nchekwa kpụ ọkụ n'ọnụ nke Command na Control Center nyere. Nkwuwapụta a bụ onye…
Njikọ chọrọ ka ọrụ ugbo mara mma maka ndị ntorobịa na Nigeria.
Network for Agricultural Technical Education of Nigeria (NATEN), na Tuzdee kpọkuru ndị niile nke a metụtara ka ha mee ka ọrụ ugbo mara mma maka ndị na-eto eto iji kwalite isonye na mmepe mba. Onye isi oche nke NATEN, Prof. Justina…
Mkpuchi ahụike: HMO na-arụ ndị otu bọọdụ ọhụrụ na ọrụ emelitere.
Otu nlekọta ahụike ahụike (HMO), Ultimate Health Management Services, na Wednesde gbara ndị Board of Directors họpụtara ọhụrụ ume ka ha kwalite ọrụ mkpuchi ahụike iji hụ na mkpuchi ahụike zuru ụwa ọnụ. GỤKWUO GBASARA YA:NHIS dọrọ…
Onyeisiala Buhari na-achị FEC Onye isi ala Muhammadu Buhari na-achị ugbu a na nnọkọ ndị isi ụlọ ọrụ Federal Executive kwa izu na Council Chambers nke Presidential Villa Abuja. Ndị nọ n'anụ ahụ na nzukọ ahụ, nke malitere 09:00 GMT, bụ…
Gọọmenti Naijiria kwuru na obodo a ga-abụ ebe ndị njem nlegharị anya ahụike na-aga.
Gọọmenti Naijiria kwuru na obodo a ga-abụ ebe ndị njem nlegharị anya ahụike na-aga. Minista na-ahụ maka mgbasa ozi na omenala, Alhaji Lai Mohammed kwupụtara nke a na Tuesday mgbe ọ malitere njem nlekọta nke ụlọ ọgwụ Duchess…
Enweghị nchekwa: Ndị omebe iwu Taraba steeti kwara arịrị banyere ogbugbu egburu ndị agha, ndị nkịtị.
Ndị ụlọ omebe iwu bụ Shawulu Kwewum na Danjuma Usman akwara arịrị maka ogbugbu ndị agha na ndị nkịtị nke ndị ohi a na-enyo enyo na-egbu na mpaghara ndịda steeti Taraba. Ha kpọkuru oku ka ebubata ndị ọrụ na akụrụngwa iji gboo nsogbu…
Ogologo ahịrị mmanụ ụgbọala ga-akwụsị n’oge adịghị anya – NNPC mesiri ndị Abuja obi ike.
Onye isi njikwa otu, Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC), Mele Kyari emeela ka obi sie ndị bi na Federal Capital Territory obi ike na ogologo ahịrị ndị a na-enwe ugbu a ga-akwụsị n'oge na-adịghị anya. O kwuru nke a…
Mmepe: Ụlọ ọrụ toro Gọvanọ Steeti Borno.
Ụlọ ọrụ National Institute for Policy and Strategic Studies (NIPSS) etoola Gọvanọ Borno steeti bụ Babagana Umara Zulum maka ọ bụghị naanị iweghachi udo na steeti ahụ kama maka ọganihu mmepe o nwetara. Onye isi NIPSS bụ Ayo Omotayo…
Ndozigharị iwu ntuli aka, ọ dị mma maka ọchịchị onye kwuo uche ya nke Nigeria – Ọnụ…
Onye isi oche, Kọmitii Ụlọ Nnọchiteanya na Mgbasa Ozi na Ọha na Ọha, Benjamin Kalu na-ekwu na mmezigharị nke Nigeria Electoral Act 2022 dị mma maka nkwụsi ike nke ọchịchị onye kwuo uche ya nke mba ahụ. Kalu mgbe ọ na-enye ndị nta…